Fiantraikan’ny Rivodoza Ava Tao Madagasikara: Ohatra Iray Sahady Amin’ny Tsy Fahafahana Maminany Mialoha Ny Toetrandro Amin’ny 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Janoary 2018 1:53 GMT
Vakio amin'ny teny русский, 繁體中文, Deutsch, عربي, Ελληνικά, Français
Pikantsary avy amin'ny lahatsary iray ahitàna ny tanànan'i Toamasina taorian'ny rivodoza Ava, avy amin'ny Africa News
Toetrandro ratsy no nanombohana ny taona 2018: Tafiotran-dranomandry sy hatsiaka mamanàla (hatramin'ny -50 C) tany amin'ny morontsiraka atsinanan'i Amerika, tafiotran-dririnina niisa 5 tao anatin'ny volana iray latsaka ao Eoropa ary ankehitriny rivodoza 2 arahana rivotra mahery ao amin'ny ranomasimbe indiana.
Namely ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara tamin'ny 5 Janoary teo ny rivodoza Ava, tamin'ny fiandohan'ny tlakandro. Nitondra rivotra nanodidina ny 150 km sy tafiotra mahery tonga hatramin'ny 205 km/ora. Ny tarehimarika vonjimaika tamin'ny Zoma alina avy amin'ny Birao nasionaly misahana ny voina voajanahary dia manome fa 989 ireo trà-boina ary maherin'ny 2.000 ireo olona nesorina tamin'ny fonenany ho fiarovana azy. Tratry ny felaka nivaivay avy amin'ilay rivodoza ny seranana lehibe indrindra ao Madagasikara, Toamasina, ary nahitàna faharavàna goavana tokoa, olona 5 no tsy hita ary manamafy ny Lehiben'ny faritra Toamasina, Cyrille Benandrasana fa :
Simba 90% i Toamasina taorian'ny fandalovan'ilay rivodoza
Teny anaty tambajotra sosialy, maneho ny haben'ny faharavàna ireo sary sy lahatsary voalohany nivoaka. Ireto ny saripika tao amin'ny Facebook nozarain'i Tsimontso Marolia:
Mponina ao Toamasina nesorina tamin'ny toerana fonenany
Toamasina taorian'ny fandalovan'i Ava
Asehon'ireo lahatsary ao anatin'ity fanadihadian'ny Matv ity ny herin'ny rivotra mahery. Manao famintinana ny toedraharaha tamin'ny 5 Janoary 2018 ihany koa ilay fanadihadiana :
Tamin'ny 1 ora tolakandro eo ho eo no niditra tao Ambalamanasy, seranan'i Toamasina, ilay rivodoza tropikaly AVA. Nahatratra 30km ny savaivon'ny mason'ilay rivodoza, mety mahatratra hatramin'ny 190km/ora ny tafiotra mahery. Nalefa ny filazana loza mitatao ho an'ny faitra manontolo.
Mbola nandravarava ihany koa tany amin'ny faritra atsimo ilay rivodoza Ava, nefa efa tsy maintsy miomana sahady handray ny rivodoza manaraka, Irving, i Madagasikara, rivodoza izay efa anjatony kilaometatra eo ho eo sisa miala amin'ny sisin-dranomasiny. Ho an'ireo olompirenena Malagasy an'aliny maro, zavatra azo tsapain-tànana ny tsy firindran'ny toetrandro, tsy ahoan'ny filohan'i Etazonia.